बब सैलुन - 2011 मा सबै भन्दा लोकप्रिय Hairstyles को एक। यो केश यो चयन र जटिल स्टाइल र, महत्वपूर्ण स्त्री र सेक्सी हेर्न चाहने आकर्षक सुंदरियों लागि पर्याप्त समय भएका भएन व्यापार महिला कार्यरत छ, बहुमुखी स्टाइलिश, सहज र स्त्री छ। काडा को संग के गर्न धेरै छ सैलुन बब, bangs संग सैलुन - तर bob कि बब र बब भिन्नता।
योजना थ्रेड quads।
क्लासिक वर्ग को लागि प्रत्येक मास्टर चिनो जो एक प्रविधी छ। योजना थ्रेड निम्नानुसार वर्गहरूको छ:
पहिलो तपाईं कपाल moisten गर्न आवश्यक र संरक्षण गर्न पानी तिनीहरूलाई छर्कनु थ्रेड समयमा भिजेको प्रभाव कपाल।
अर्को तिमी बाल कतरनी भविष्य को लम्बाइ निर्धारण गर्न आवश्यक छ, यसको बारेमा 1 सेमी सुकाएपछि pripodnimut कि बाल सम्झना गर्न महत्त्वपूर्ण छ।
को सैलुन गर्न गर्नाले, पहिले occipital भाग जारी सम्झना - जग र कपाल को लम्बाइ छ। यो Strand को सम्पूर्ण केश बराबर हो - occiput को तल बाक्लो 1 सेमी को एक Strand छ।
मास्टर टाउको को जानेबेलामा को केन्द्र मा आवास दुवै पक्षलाई केश smooths। केश लम्बाइ को पक्ष मा पछिल्लो भन्दा ठूलो हुनुपर्दछ, तर संक्रमण तीव्र protrusions बिना, चिल्लो हुनुपर्छ।
- अनुहार को बीचबाट र लामो - को काँध सम्म छोटो र: बब सैलुन लम्बाईहरू को एक किसिम हुन सक्छ।
अन्तमा यो धमाका ध्यान आवश्यक छ - त्यहाँ, प्रयोग गर्न आफ्नो कल्पना बारी र महान हुनेछ एक विशाल क्षेत्र छ!
त्यहाँ धेरै विकल्पहरू, यसको universality बताउँछन् जो विभिन्न प्रकारका बीच तपाईं तपाईंलाई लागि हो कि केश चयन गर्न सक्नुहुन्छ किनभने बब सैलुन छन्। छोटो, asymmetric, graded, रैक-बल - यो यो बहुमुखी सैलुन सबै विकल्प, यसबाहेक, यी विकल्पहरू, त्यहाँ haircuts वर्ग आधारित बाहेक छ। यी haircuts तिनीहरूले जस्तोसुकै अनुहार को उमेर र आकार को, को बालिका फिट, बोरिंग क्लासिक केश विविधता गर्न सक्नुहुन्छ। वर्ग आधारित आधारभूत उदाहरण haircuts विचार गर्नुहोस्।
एक वर्ग चरण आधारित सैलुन -, "भर्याङ" उच्चारण क्लासिक Hairstyles गर्न विपरीत fashionistas 2011 यो केश धारिलो संक्रमण लम्बाई बाल द्वारा विशेषता छ को विकल्प, यो तथ्यलाई द्वारा हासिल भएको एक ठूलो कोण मा बाल दाढी।
अनुहार कपाल को एक पक्ष अन्य भन्दा धेरै छोटो छ जसमा अमिल्दो बब, - 2011 वर्ग सैलुन मा फैशन। वर्ग आधारित यो सैलुन अक्सर बाल थप स्टाइलिश र सुरुचिपूर्ण देखिन्छ त, एक पक्ष जानेबेलामा सँगसँगै।
यस वर्ष वास्तविक चिल्लो र स्पष्ट कट लाइनहरू केश देखिन्छ। यो केश बिल्कुल सीधा देखिन्छ, स्पष्ट अवलोकन कुनामा कटौती। यो प्रविधी पनि सामान्य र को डिजाइन मा प्रयोग गरिन्छ अप्रत्यक्ष bangs, मुख्य लम्बाइ haircuts मा सहज सार्न सक्छन् जो।
बब सैलुन छोटो बब, उदाहरणका लागि, छोटो haircuts लागि आधार बन्न सक्छ। बाक्लो र बाल थप वा कम लामो - कारण कपाल माथि frontal क्षेत्र मा र छोटो कटौती गरिएको छ भन्ने तथ्यलाई गर्न घाँटी खुला - यो केश सुरुचिपूर्ण र स्त्री छ।
विशेष क्यासकेड सैलुन एक दण्ड आधारित सबै भन्दा फैशन को रूपमा 2011 मा प्रस्तावित। रूपमा प्रदर्शन यो सैलुन हजामको निम्नानुसार: पहिलो, एक सरल वर्ग, एक बाल मा बाल को लम्बाइ प्रदर्शन - को काँध मा, एक मास्टर मिल्स कपाल को समाप्त कोर्न गर्न। चिउँडो स्तरमा लामो अप्रत्यक्ष चेक bangs थ्रेड समाप्त हुन्छ। यो केश यो वर्ष अत्यन्तै सान्दर्भिक छ, यो सबै fashionistas गर्न अपील गर्नेछ।
जो कटौती तिमी चयन, 2011 मा वर्ग, तपाईं monotonous Hairstyles को थकित छन् भने, धेरै लोकप्रिय छ कि सम्झना, सैलुन प्रयोग धेरै सफल हुनेछ। र हामी एक विशेष कार्यक्रम, आफ्नो नयाँ छवि हेर्न मदत गर्नेछ जो प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, त्यसपछि सबै ठीक हुनेछ!
माल को स्वामित्व को स्थानान्तरण
VGT भित्री र बाहिरी प्रयोगको लागि रंग। प्रजाति
आधुनिक रूसी poetess